Samsung Galaxy Tab S3, fahatsapana voalohany | Androidsis
Ary farany, ny Samsung Galaxy S8 dia tsy naseho tao amin'ny MWC. Ny krizy Galaxy Note dia nanery ny mpanamboatra hanemotra ny famoahana ny sainam-pirenena vaovao, izay hivoaka amin'ny 29 martsa. Saingy nanararaotra ity endriny tokana ity ny mpanamboatra hanehoana ny takelaka vaovao: ny Samsung Galaxy Tab S3.
Miresaka fitaovana iray manaitra isika, miaraka amina endrika sy fitaovana entina midera azy amin'ny faritra avo indrindra amin'ny faritra misy azy ary mahavita an'io Samsung Galaxy Tab S3 safidy tena mahaliana raha mitady takelaka avo lenta ianao. Andao hojerentsika ny fiheverantsika voalohany taorian'ny fitsapana ny Tab S3 ao amin'ny MWC 2017.
1 Volavola iray mitazona ny ADN an'ny Samsung
1.1 Famaritana teknika momba ny Galaxy Tab S3
Volavola iray mitazona ny ADN an'ny Samsung
Ny Galaxy Tab S3 dia fitaovana tena manify. Be dia be. Ny santionany amin'izy ireo dia hita ao amin'ny azy ireo hateviny, 0.6 centimetatra fotsiny izany, miaraka amin'ny loà 429 grama ny lanjany, ataovy ity Galaxy Tab S3 fitaovana tena ahazoana aina ity ary azo tantanana na dia eo aza ny habeny.
Ny gripa dia mahazo aina ary ny zava-misy fa misy vitsivitsy Sisiny boribory ampio mba hahazoana antoka fa tena mety ny fihazonana. Tsy dia mahazo aina toy ny takelaka 8-inch izy io, fa raha dinihina ny diagonal an'ny efijery dia mila milaza aho fa ny ekipa mpamorona Samsung dia nahavita asa tsara.
Ary tsy azontsika hadinoina ny famaranana tena tsara; Ilay fitaovana vaovao avy amin'ny mpamokatra Koreana dia manana chassis izay manambatra aliminioma miaraka amin'ny fitambaran'ny vera any aoriana. Fahafinaretana azo tratrarina ary mamela fahatsapana tena lafo vidy rehefa tohina. Mazava ho azy, ny marika ny dian-tànana dia hiseho manerana ny faran'ity Samsung Galaxy Tab S3 ity
Famaritana teknika momba ny Galaxy Tab S3
modely Galaxy Tab S3
Operating System Android 7.0 - Samsung Experience
efijery SuperAMOLED 9.7 santimetatra miaraka amina vahaolana 2.048 x 1.536 teboka (264 dpi)
processeur Qualcomm Snapdragon 820 (2x Kyro 2.15 GHz + 2x Kyro 1.6 GHz) + Adreno 530
Tahiry anatiny 32GB miaraka amin'ny fanohanana microSD
Chambre lehibe MP 13 miaraka amin'ny autofocus - f / 1.9 - flash LED
Fakan-tsary mialoha MP 5 - f2.2
Conectividad LTE (miankina amin'ny maodely); WiFi 802.11 a / b / g / n / ac - Bluetooth 4.2 LE - NFC - USB-C v3.1 OTG
bateria 6.000 mAh miaraka amina fiampangana haingana
lafiny X X 237.3 169 6 MG
lanja 429-434 grama
vidiny 679-769 euros
Raha ara-teknika dia miresaka takelaka tena matanjaka isika. Samsung dia nisafidy solosaina hamela ny lalao na ny fampiharana hifindra raha tsy misy olana, na dia be aza ny enta-mavesatra ilain'izy ireo. Saingy ny teboka miavaka amin'ny Galaxy Tab S3 dia tsy miaraka amin'ny heriny, izay antenaina.
Amin'ny lafiny iray dia manana ny azy isikampandahateny efatra, ny vokatry ny fifanekena an'ny Samsung sy AKG, izay manome ny Samsung Galaxy Tab S3 misy kalitao feo manaitra. Afaka nanao fitsapana vitsivitsy teo amin'ny toeran'ny mpanamboatra aho ary ny fahatsapana voalohany dia tena tsara. Raha manampy an'ity efijery 2K-azy ity isika dia manana fitaovana manintona tokoa raha te hankafy ny sarimihetsika sy andian-tantara ankafizinay amin'ny takelaka.
Ary tsy afaka manadino momba izany isika S-Pen, ilay stylus Samsung fanta-daza miaraka amin'ny takelaka ataon'ny mpanamboatra ary ahafahantsika manao safidy maromaro izay manokatra karazana fahafaha-manao zavatra tsy mampino amin'ny endrika fampiharana ahafahantsika manararaotra ny penina maranitra matanjaka an'ny Galaxy Tab S3. Raha fintinina, fitaovana iray izay toa tena tsara ary afaka mifaninana amin'ny laharan'ny iPad an'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy Tab S3, fahatsapana voalohany